Puntland iyo dawladda Cumaan oo iska kaashanaya la dagaalanka burcad-badeeda. – Radio Daljir
Puntland iyo dawladda Cumaan oo iska kaashanaya la dagaalanka burcad-badeeda.
Bosaso, May 09 -Dowladda Cumaan iyo maamulka Puntland ayaa heshiis ku gaaray in si wadajir ah la isaga kaashado la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda iyo argagaxisada, kadib shir laba geesood ah oo dhowaan dalka Cumaan ku dhexmaray masuuliyiin katirsan maamulka Puntland iyo dowladda Cumaan.
Wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan oo manta dalka dib ugu soo laabtay, kadib markii safar shaqo oo uu ku tagay dalalka Imaaraatka Carabta iyo Cumaan ayaa faahfaahiyay waxyaabaha kasoo baxay shirkii ay dowladda Cumaan ay la qaateen.
?Inta qodob ee ugu muhiimsan waxa weeye inaan iska kaashano amniga, inaanu ka hortagno nimanka burcadbadeeda doonyaha afduuba, inaan argagaxisada la dagaalano intaas ayaa ugu muhiimsanaa? ayuu yiri wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay rajaynayaan waxbadan inay iska badalaan amaanka.
Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Cumaan ay casuumaad rasmi ah ay u fidisay maamulka Puntland, Cumaan ayaa ganacsi qoto dheer le leh Puntland, waxaana loo iibgeeyaa waxyaabaha udugga oo fooxa ay ka mid tahay taasi oo si weyn uaga baxa deegaanada Puntland.